वैशाखमा राेकिएकाे कक्षा १२ को परीक्षा आजबाट, ४ लाख ३२ हजार विद्यार्थी सहभागी हुने ! « Bagmati Online
वैशाखमा राेकिएकाे कक्षा १२ को परीक्षा आजबाट, ४ लाख ३२ हजार विद्यार्थी सहभागी हुने !
काठमाडौं, ९ मंसिर । काेराेना भाइरस (कोभिड–१९ं) महामारी र लकडाउनका कारण गत वैशाखमा रोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा आजबाट शुरु हुँदै छ । परीक्षामा देशभरबाट ४ लाख ३२ हजार ५ सय विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् । परीक्षा समय बढीमा साढे १ घण्टाको हुने जनाइएकाे छ । देशभरका ४ हजार १ सय ५ विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र राखिएकाे छ भने भाैतिक दूरी कायम गरेर पूर्णरुपमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै परीक्षा सञ्चान हुने राष्ट्रिय परीक्षा बाेर्डले जनाएकाे छ ।
परीक्षाका क्रममा एउटा कोठामा २ मिटरको दूरी कायम गरी बढीमा २० जनासम्म मात्र राख्न पाइने व्यवस्था बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँ अनुसार घर पायक पर्ने र अाफू अध्ययन गरेकै स्कुलमा परीक्षार्थीका लागि परीक्षा केन्द्र ताेकिएकाे छ । साथै त्यसरी घरपायक फरक जिल्लाबाट पनि परीक्षा दिन सकिनेछ । यसरी फरक जिल्लाबाट दिने विद्यार्थीको संख्या करिब १३ हजार रहेको छ । स्थानीय सरकारहरूको सहयोगमा परीक्षा व्यवस्थापन गरिएको उहाँकाे भनाइ छ । केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकले समेत अनिवार्यरुपमा ज्वरो परीक्षण गरी मास्क लगाउनुपर्ने र परीक्षा शुरु भएपछि अन्यलाई प्रवेश नदिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । प्रश्नपत्र हेर्न सबै केन्द्रलाई छुट्टै कोडको व्यवस्था गरेको बाेर्डले जनाएकाे छ ।